Madaxwaynaha oo ku dhawaaqay samato bixinta dadka abaarto hayso siiba badbaadin Hooyada Dhalaanka |
Madaxwaynaha oo ku dhawaaqay samato bixinta dadka abaarto hayso siiba badbaadin Hooyada Dhalaanka
Madaxweyne Jahmuuriyada Fadaral Somaliya Ayaa Ku dhawaaqay samato bixinta dad abaarto hayso siiba badbaadin Hooyada Dhalaanka Soomaaliyeed, Madaxwaynaha ayaa yidhi xoolo warkooda waa la dhaafay waa in aynu badbaadino Shacabka Soomaaliyeed.
Madaxwaynaha oo ayaa maanta isugu yeedhay guddiga gurmadka abaaraha, Beesha caalamka iyo Ganacsatada Soomaaliyeed waxaana ka wada hadleen sidii loogu gurman lahaa dadkii ay abaaruhu saameeyeen. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisaba inay ka qaybqaataan badbaadinta dadka Soomaaliyeed ee walaalahood ah ayaa madaxwaynuhu yidhi.
Abaaraha ayaa ahaa kuwo ay dadku lasoo tacaalayeen lixdii bilood ee lasoo dhaaafay balse madaxwayne Farmaajo ayaa ka dhigay ajandaha horyaala shacabka iyo dawladaba. iyada oo ay farxada fantasiyaha isbadalka taariikhiga ah ee ay shacabka qurbuhu ku garab istaagayaan dawlad ay ka dhacayaan haatan dunida daafaheeda.
Magaalooyinka ay xafladahani ka dhacayaan ayaa waxaa ka socda abaabu ay dadku is abaabulayaan iyaga oo doonaya inay si toos ah u garab istaagaan dawladooda. Hadaba dadka marmarsiiyaha ka dhiganaya abaaro ayaa dadka kajira ee yaan la dabaal dagin xagay ku maqnaayeen lixdii bilood ee tagay.
Waxaa hubaal ah id daka dabaal dagayaa qaarkood horay uga gaashaanteen Abaaraha, iyaga oo caawinayay dadkooda iyo dalkooda. Dadkan marmarsiiyaha ka dhiganaya in abaaro dalka ka jiraan ha laga helo dhaqaalaha abaaraha, intayada fansiyaha dawlada ku mashquulsan gacana Abaaraha ayaan kula dagaalamanaa gacana Dawlada ayaan ku garab istaaganaa.